Ungayisebenzisa Kanjani i-Akhawunti Yami ku-Webhu ye-Twitter? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
para cisha i-Akhawunti yakho kuwebhu, Umsebenzisi we-Twitter: Kudinga ukungena ngemvume kwi-Akhawunti yakho yePeriscope, chofoza kusithonjana sakho seProfayili bese ukhetha Amasethingi kumenyu ye-pop-up, chofoza ku-Deactivate account.
Ngemuva kokuchofoza Yenza i-akhawunti isebenze, kuvela ibhokisi lengxoxo elinemethrikhi esikrinini, uMsebenzisi we-Twitter uyachofoza ku-Yenza i-akhawunti isebenze ukuqinisekisa ukusebenza kwe-Akhawunti. Uma inqubo isiqediwe, uMsebenzisi akasenayo i-akhawunti esebenzayo ye-Twitter.
Lapho Umsebenzisi we-Twitter ekhetha Ukuvula i-akhawunti, uyabuzwa isiqinisekiso sesinqumo sakho ukwenza kungasebenzi. Uma ukhetha ukulanda idatha yomuntu siqu, inkomba yokulayisha iyavela ngenkathi isicelo sakho sicubungulwa; uqedele isicelo sakho bese eqala ukulanda ifayela ngemininingwane yakho.
Phuma ku-akhawunti yami yePeriscope
Uma Umsebenzisi we-Twitter ulahlekelwe iselula yakhe futhi udinga ukuphuma kwi-Akhawunti yakho yePeriscope; Ngale njongo, kufanele ulandele le nqubo: Landela izinyathelo ngedivayisi ye-iOS noma ye-Android; Uma ungene ngemvume ku-Periscope nge-Akhawunti ye-Twitter, iya kuzilungiselelo ze-Twitter ku-PC yakho.
Khetha Buyisa ukufinyelela okuhambisanayo ne-Periscope; Khetha Buyisa ukufinyelela ku-Twitter kwe-iOS noma i-Twitter ye-Android, lokhu kuncike kudivayisi uMsebenzisi anayo. Ngemuva kokulanda isicelo sePeriscope kuselula yakho entsha, ngena ngemvume ku-akhawunti yakho yePeriscope.
Ekugcineni, khetha Iphrofayili, Ukucushwa nokuvala isikhathi kuwo wonke amadivayisi. Manje njengoba uMsebenzisi we-Twitter ethobele yonke inqubo yokuphuma kwi-Akhawunti yakhe yePeriscope, usenethuba lokungena ngemvume kuselula yakhe entsha.
DALA ISITRAYI SESIKHATHI
para dala ukusakaza, Umsebenzisi we-Twitter kumele: Chofoza kuthebhu ye-Transmission, chofoza ku-Dala ukudluliswa, faka izinkambu ezidingekayo: Igama lokudlulisa, Isigaba: Ungakuchaza kanjani ukudluliswa kwakho? nomthombo.
Umsebenzisi we-Twitter udinga ukukhetha ifayela le- Inketho yokuzwa: Esidlangalaleni noma ngasese; khetha inketho yoHlelo: Qala ngokushesha noma uqale ngemuva kwesikhathi; vula izilungiselelo ezithuthukisiwe; vimbela Imikhawulo Yokuqukethwe: Faka noma Ungafaki.
Shumeka ividiyo kusuka kokufaka ikhodi kumthombo futhi uhlole ukuthi umkhiqizi wokubuka kuqala uyayikhombisa yini ividiyo; Ngokuchofoza ku-Dala ukudluliswa, Umsebenzisi we-Twitter unenketho yokukhetha: Qala ngokushesha noma Qala kamuva.
Tweet bese uqeda Ukudluliswa ku-Twitter
Epulatifomu le-Twitter, Umsebenzisi unenketho yoku Thwebula Umsakazo, ukubheka le nqubo elandelayo: Chofoza kuthebhu yokuThutha; chofoza ukusakaza okukhona; Chofoza inkinobho ye-Tweet futhi usukulungele ukungena ku-inthanethi.
Mayelana qeda iTransmission, Umsebenzisi we-Twitter udinga ukulandela le nqubo: Chofoza kuthebhu ye-Transmission, chofoza kokudluliswa okukhona, iya ezansi kwewindi lokuhlonza lokudlulisa.
Ukuvala, Umsebenzisi we-Twitter uchofoza kufayela le- Qedela inkinobho; Lapho zonke izidingo zenqubo sezifeziwe, ukudluliswa kwayo kuzophinda kukhiqizwe kuTwitter ukuze kujatshuliswe bonke abasebenzisi be-Twitter enkundleni ye-Twitter.
1 Phuma ku-akhawunti yami yePeriscope
2 DALA ISITRAYI SESIKHATHI
3 Tweet bese uqeda Ukudluliswa ku-Twitter